कसरी इंस्टाग्राम भिडियो विज्ञापनहरू सिर्जना गर्ने जुन तपाईं परिणामहरू पाउनुहुन्छ Martech Zone
इन्स्टाग्राम विज्ञापनले फेसबुकको व्यापक र सबै समावेशी विज्ञापन प्रणाली प्रयोग गर्दछ जुन व्यक्तिलाई उनीहरूको उमेर, रुचि र व्यवहारमा आधारित लक्षित गर्दछ।
अमेरिकामा अपरेटिंग विज्ञापन एजेन्सीहरूको in operating% तिनीहरूका ग्राहकहरूको लागि इन्स्टाग्राम विज्ञापनहरू समावेश गर्ने योजना बनायो।
चाहे तपाईंसँग सानो आकारको व्यवसाय वा ठूलो स्तरको संगठन हो, इन्स्टाग्राम भिडियो विज्ञापनहरू सबैलाई लक्षित दर्शकहरूमा पुग्नको लागि अद्भुत अवसरहरू प्रदान गर्दछ। तर, ब्रान्डको बढ्दो संख्यासँगै इन्स्टाग्रामको हिस्सा बनिदै, प्रतिस्पर्धा अत्यन्त आक्रामक र प्रतिस्पर्धी हुँदै गइरहेको छ।
धेरै जसो मानिससँग अर्को सेट छ कि भिडियो सामग्री सिर्जना गर्नु भनेको फोटो लिने वा लिखित सामग्री सिर्जना गर्नु जस्तो होईन। भाग्यवस, तपाईं प्रयोग अद्भुत भिडियो सिर्जना गर्न सक्नुहुनेछ नि: शुल्क स्टक फुटेज साइटहरू.
यदि तपाईं सर्तसँग परिचित हुनुहुन्न भने, स्टक फुटेज रोयल्टी फ्री फुटेज हो जुन तपाईं विभिन्न वेबसाइटहरू मार्फत अधिकार खरीद गर्न सक्नुहुनेछ। र त्यहाँबाट छनौट गर्न धेरै स्थानहरू छन्। यहाँ को एक सूची छ
२०१ 2015 मा फिर्ता, इन्स्टाग्रामले इन्स्टाग्राम विज्ञापनहरू प्रस्तुत गर्‍यो जसले व्यवसाय मालिकहरूलाई प्रयोगकर्ताहरूको विशेष समूहमा पुग्न मद्दत गर्दछ र अन्ततः तिनीहरूलाई सम्भावित खरीददारहरूमा रूपान्तरण गर्दछ। फेसबुक विज्ञापन प्रयोग गरेर, सोशल मिडिया बजारहरूले अब कुनै पनि विशिष्ट खण्डलाई million०० मिलियन भन्दा बढी सक्रिय इन्स्टाग्राम प्रयोगकर्ताहरूलाई लक्षित गर्न सक्दछन्। सबैमा, त्यहाँ एक विशाल सम्भावित छ, बस तपाईंको प्रतीक्षा गर्दै।
सिर्जना गर्न र चालुसँग सम्बन्धित केही आधारभूत कुराहरू सिक्न तल स्क्रोल गर्नुहोस् भिडियो आधारित इन्स्टाग्राम विज्ञापन। यसको अतिरिक्त, हामी तपाईंको विज्ञापन प्रदर्शन नाप्न र अपग्रेड गर्न केहि उत्तम अभ्यासहरू हाइलाइट गर्नेछौं। तर त्यो भन्दा पहिले, इन्स्टाग्राम भिडियो विज्ञापनको main मुख्य कोटीहरूमा द्रुत हेराई गर्नुहोस् जुन तपाईं आफ्नो श्रोताको लागि बृद्धि गर्न सक्नुहुन्छ।
इन्स्टाग्रामको लागि भिडियो विज्ञापनहरूको प्रकार
इन-फिड भिडियो विज्ञापन - एक लोकप्रिय इन्स्टाग्राम भिडियो विज्ञापन कोटी जसमा भिडियो विज्ञापनहरू निर्बाध रूपमा प्रयोगकर्ताको फिडमा मिसाउँदछन् र तपाईंको लक्षित दर्शकहरूमा पुग्नको लागि अधिक प्राकृतिक तरीका प्रदान गर्दछ।
Instagram Stories - पूर्ण स्क्रीन भिडियो विज्ञापनहरू कथाहरू बीच देखा पर्दछ लगभग m००mn प्रयोगकर्ताहरू दैनिक हेर्नुहोस् (ती प्रयोगकर्ताहरू अनुसरण गर्छन्)। किनभने Instagram Stories सीमित २-घण्टा विन्डोको लागि देखाउनुहोस्, तिनीहरू विज्ञापन प्रचार सामग्री र सीमित-समय सौदाहरू र प्रस्तावहरूको लागि आदर्श हुन्।
क्यारोसेल विज्ञापनहरू - क्यारोसेल विज्ञापनको साथ, मार्केटर्ससँग ब्रान्डेड भिडियोहरूको श्रृ show्खला प्रदर्शन गरेर विशिष्ट उत्पाद वा सेवा प्रवर्धन गर्न विकल्प हुन्छ जुन प्रयोगकर्ताहरू स्वाइप गर्न सक्छन्। यो प्लेसमेन्ट ब्रान्डको लागि ठूलो हो जुन सामग्रीको दायरा बजारमा खोजिरहेका छन् वा केवल उनीहरू को हुन् र उनीहरूले के प्रस्ताव गर्छन् भन्ने बारेमा विस्तृत जानकारी देखाउन चाहान्छन्। यसका अतिरिक्त, तिनीहरू उत्पादन खरीद गर्न रूचि राख्ने ग्राहकहरूलाई निर्देशित गर्न उत्पादन वेबसाइटको लिंक पनि थप्न सक्दछन्।
-०-दोस्रो भिडियो विज्ञापन - -०-सेकेन्डको भिडियो विज्ञापन इन्स्टाग्रामले आगन्तुकहरूको लागि अन्तर्क्रियात्मक सिनेमाई भावना सिर्जना गर्ने प्रयासमा प्रस्तुत गरेको थियो जुन उनीहरूको मनमोहक दृश्य रचनात्मकता मार्फत प्रेरित गर्दछ।
इन्स्टाग्राम मार्की - इन्स्टाग्रामले भर्खरै 'इन्स्टाग्राम मार्की' नामको अर्को उपकरण प्रस्तुत गर्‍यो जसले मार्केटहरूलाई छोटो अवधिमा लक्षित श्रोताहरूलाई चेतना फैलाउन र लक्षित दर्शकहरूलाई पुर्‍याउन सक्षम गर्दछ।
इंस्टाग्राम भिडियो विज्ञापनको साथ सुरूवात गर्दै
तपाईंले वास्तवमै आफ्नो विज्ञापनहरू सिर्जना गर्न सुरू गर्नु अघि, यो आवश्यक पर्दछ कि तपाईंको इन्स्टाग्राम विज्ञापनको समग्र गुणस्तर र प्रकार्यलाई असर गर्न सक्ने केहि पूर्वरक्तहरू केहि सिक्न।
इन्स्टाग्रामले अनुमति दिन्छaक्याप्शन लम्बाई २२०० भन्दा बढी वर्णहरूको छैन। तर, उत्तम परिणामहरूको लागि १2200-१135० वर्णहरू भन्दा बढि नखोज्नुहोस्
यो भिडियो को लम्बाई १२० सेकेन्ड भन्दा बढी हुनु हुँदैन
भिडियो फाईलहरू भित्र हुनुपर्दछ MP4 वा MOV प्रत्येक फाईल आकारका साथ ढाँचा GB जीबी भन्दा ठूलो छैन
इन-फिड भिडियो विज्ञापन अधिक हुन हुँदैन 600 × 750 (4: 5) ठाडो भिडियोहरूको लागि। ल्यान्डस्केप भिडियोको मामलामा, रिजोलुसन हुनै पर्छ 600×315 (1:91:1) वर्ग भिडियोहरूको लागि, यो हुनुपर्दछ 600 × 600 (1: 1)
इन्स्टाग्राम कथाहरूको लागि, रिजोलुसन हुनै पर्छ 600 × 1067 (9: 16)
क्यारोसेल भिडियो विज्ञापनहरूको लागि, आदर्श रिजोलुसन हो :०० 600 600०० १: १ पक्ष अनुपातको साथ
अब, सयौं सामग्री सिर्जनाकर्ताहरूलाई भिडियो सम्पादन सेवाहरू प्रदान गरे पछि मेरो व्यक्तिगत अनुभवबाट, मैले याद गरे कि १: १ र:: video भिडियो विज्ञापनहरू राम्रो प्रदर्शन गर्छन्। त्यसोभए, जब तपाईं सक्नुहुनेछ, त्यो अनुपात अनुपातमा टाँस्न प्रयास गर्नुहोस्।
कसरी इंस्टाग्राम भिडियो विज्ञापनहरू सिर्जना गर्ने जुन तपाईं परिणाम पाउनुहुन्छ - चरण निर्देशन द्वारा चरण
भाग्यवस, त्यहाँ कुनै रकेट विज्ञान सामिल छैन उच्च गुणवत्ता इन्स्टाग्राम भिडियो विज्ञापनहरू सिर्जना गर्न। साधारण रूपमा, सुरू गर्नको लागि यस छ-चरण आधारभूत गाईडलाई पछ्याउनुहोस्:
चरण १: एउटा उद्देश्य छनौट गर्नुहोस्
पहिलो र सब भन्दा महत्त्वपूर्ण, तपाइँले एक उद्देश्य चयन गर्न आवश्यक छ। सरल शब्दमा भन्नु पर्दा तपाईले आफ्नो परिभाषा गर्नु पर्छ मार्केटिंग उद्देश्ययस कोटी अन्तर्गत के देखाउनको लागि कुन खास लक्ष्य तपाईं आफ्नो विज्ञापन प्राप्त गर्न चाहनुहुन्छ। के तपाईं ब्रान्ड सचेतना बढाउन खोज्दै हुनुहुन्छ वा तपाईंको उद्देश्य तपाईंको बिक्रीलाई बढावा दिन हो? यी प्रश्नहरूको उत्तर छनौट गर्न धेरै सावधान हुनुहोस् किनकि यसले प्लेसमेन्टहरूलाई असर गर्न सक्छ र तपाईंलाई तपाईंको मनपर्ने दर्शकहरूमा पुग्न मद्दत गर्दछ जुन तपाईंको विज्ञापनहरूमा बढी प्रतिक्रिया देखाउँदछ।
चरण २: दर्शक लक्ष्यीकरण छनौट गर्नुहोस्
यो अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष हो जुन तपाईंको कुराकानीलाई ठूलो प्रभाव पार्छ। यदि लक्ष्यीकरण निष्क्रिय छ, तपाईं प्रयोगकर्ताहरूको विशेष समूहलाई लक्षित गर्न सक्षम हुनुहुने छैन। तपाईं स्थान, उमेर, भाषा, लि gender्ग वा अन्य कुनै पनि मनपर्ने लक्ष्यीकरण विकल्पहरू चयन गर्न सक्नुहुनेछ। जहाँसम्म तपाईं निश्चित जीवन स्तर भएको कुनै विशेष आयु समूहलाई लक्षित गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ भने, तपाईं त्यो पनि गर्न सक्नुहुन्छ।
त्यसोभए निश्चित गर्नुहोस् कि तपाईसँग श्रोता लक्षित छन् अन्यथा कसैले पनि तपाईंको सामग्री अवलोकन गर्दैन.
चरण:: तपाईंको प्लेसमेन्टहरू सम्पादन गर्नुहोस्
तपाइँको दर्शकलाई लक्षित छनौट गरेपछि, प्लेसमेन्टहरू छनौट गर्नुहोस्। जब तपाईं यो विकल्प क्लिक गर्नुहुन्छ, Instagram र फेसबुक प्लेसमेन्टहरू सक्षम भइसकेका छन्। सामान्यतया, तपाईले यी सबै प्लेसमेन्टहरू राम्रो नतीजा प्राप्त गर्नका लागि सक्षम राख्नुपर्दछ। जहाँसम्म, यदि तपाईंसँग कुनै पनि अन्य प्राथमिकताहरू छन् वा तपाईं कुनै खास कुरा बहिष्कार गर्न चाहनुहुन्छ भने, तपाईं आफ्ना आवश्यकताहरू मिल्दो विकल्पहरू सम्पादन गर्न सक्नुहुनेछ।
चरण:: बजेट र तालिका
यदि तपाईं म्यानुअल बिड छनौट गर्नुहुन्छ भने, तपाईंले आफ्नो बजेट सेट गर्नुपर्नेछ र तपाईंको विज्ञापनको लागि बिड। साधारणतया, तपाइँको बजेट तपाइँ एकल क्लिक / प्रभाव को संख्या या कुनै अन्य विशेष चीज मा लगानी गर्न चाहानुहुन्छ कुल लागत को प्रतिबिम्बित गर्दछ। यस चरणले तपाईंलाई तपाईंको विज्ञापनहरूमा सुरूवात र मिति सेट गर्न पनि अनुमति दिन्छ।
चरण:: विज्ञापन सिर्जना गर्नुहोस्
त्यसो भए, अब तपाइँ आफ्नै इन्स्टाग्राम विज्ञापन सिर्जना गर्न तयार हुनुहुन्छ। साधारण रूपमा, तपाइँको मनपर्ने विज्ञापन प्रकार छान्नुहोस् र सबै ठाउँमा यसको ठाउँमा राख्नुहोस्। साथै, तपाईंको भिडियो विज्ञापन पूर्वावलोकन गर्न निश्चित गर्नुहोस् कि यो फिडमा वास्तवमा कस्तो देखिन्छ जाँच गर्न। निश्चित हुनुहोस् कि तपाईंको विज्ञापन हरेक प्लेसमेन्टमा उत्तम देखिन्छ र पूर्ण रूपमा क्रप गरिएको छ। लिंक समावेश गर्नुहोस् जुन तपाईं आफ्नो विज्ञापन प्रयोगकर्ताहरूलाई अवतरण पृष्ठमा लैजानुहुन्छ किनकि यसले खरिदकर्ताहरूलाई आकर्षित गर्दछ र बिक्री बढाउँदछ। तपाईंको लिंक क्लिक गर्न प्रयोगकर्ताहरूलाई प्रेरित गर्न कार्यमा एक अद्भुत कल (CTA) थप्न नबिर्सनुहोस्। यस चरणमा, तपाईं आफ्नो प्रतिलिपि बहु भाषाहरूमा थप्न सक्नुहुन्छ यदि तपाईं एक द्विभाषी श्रोतालाई लक्षित गर्दै हुनुहुन्छ।
चरण:: समीक्षाको लागि तपाइँको विज्ञापन बुझाउनुहोस्
एक अन्तिम पटकको लागि तपाईंको विज्ञापनको आलोचना गर्नुहोस् र यदि सबै प्लेसमेन्टमा सबै चीज राम्रो देखिन्छ भने समीक्षाको लागि सबमिट गर्नुहोस्। तपाइँको प्रतिलिपि अनुमोदित हुन को लागी धेरै दिन लाग्नेछ।
मिलियन डलर इन्स्टाग्राम भिडियो विज्ञापन सल्लाहहरू
एक उत्तम हुक सिर्जना गर्नुहोस् - दिमागमा राख्नुहोस्, इन्स्टाग्राम प्रयोगकर्ताहरू चाँडै नै उनीहरूको न्यूजफिडबाट स्क्रोल गर्दछन्, त्यसैले तपाईको विज्ञापन गणनाको पहिलो केहि सेकेन्डहरू बनाउनु पर्छ। आदर्श रूपमा, तपाईंले ध्यान खिच्नको लागि तपाईंको भिडियोको प्रारम्भिक seconds सेकेन्डमा चाल र कार्यहरू समावेश गर्नुपर्दछ। यदि तपाईंको विज्ञापनको केहि सेकेन्डहरू ढिलो र अझै पनी छन् भने, प्रयोगकर्ताहरूले तपाईंको भिडियो याद नगरी स्क्रोल गर्नेछन्।
भिडियो सम्पादन - मुकुट देखि बाहिर खडा एक बेंजर मोन्टेज सिर्जना अति महत्त्वपूर्ण छ। त्यसैले कुनै भिडियो बेवास्ता नगर्नुहोस् भिडियो सम्पादन प्रक्रिया। तपाईले फिलिम गर्नु भएपछि कच्चा फुटेज इन्स्टाग्राममा मात्र अपलोड नगर्नुहोस्। एक आकर्षक, आँखा आकर्षक तरीकाले तपाईंको भिडियो सम्पादन गर्न समय लिनुहोस्।
पाठ थप्नुहोस् - अडियो विकल्प पूर्वनिर्धारित रूपमा म्यूटमा सेट गरिएको छ, तपाईंले सन्देश पठाउन केही पाठ थप्न आवश्यक छ। यस समयमा धेरै अनुप्रयोगहरू उपलब्ध छन् जस्तै एप्पल क्लिप्स जसले तपाईंलाई ध्यान आकर्षण गर्न गतिशील पाठ प्रभावहरू सिर्जना गर्न मद्दत गर्दछ।
समस्या सामाधान गर्नु - इन्स्टाग्राम विज्ञापनहरू बनाउने मूल उद्देश्य समस्यालाई पहिचान गर्नु हो र विशेष उत्पादन / सेवाको आकारमा उत्तम समाधान खोज्नु हो। जब तपाईंको विज्ञापनले समस्या समाधान गर्नेको छाप दिन्छ, यसले तुरून्तै प्रयोगकर्ताको साथ भावनात्मक बन्धन विकास गर्दछ। एकचोटि तपाईंले तिनीहरूलाई सफलतापूर्वक व्यस्त राख्नुभयो, तिनीहरूलाई देखाउनुहोस् कसरी तपाईंको उत्पादन / सेवा तिनीहरूको लागि उद्धारकर्ता हुन सक्छ।
लामो क्याप्शन बेवास्ता गर्नुहोस् - जबकि इन्स्टाग्रामले क्याप्शनको लागि २२०० क्यारेक्टरहरूलाई अनुमति दिन्छ, यसलाई छोटो र अर्थपूर्ण राख्न उत्तम हुन्छ। सबै पछि, कोही पनि जटिल पाठको विशाल ब्लकहरू पढ्न चाहँदैनन्। त्यसोभए, निश्चित गर्नुहोस् कि तपाइँ आफ्नो इन्स्टाग्राम विज्ञापनको लागि क्याप्शन लेख्दा १ 2200०-११130० अक्षरहरू भन्दा बढी हुनुहुन्न।
एकल उद्देश्यमा केन्द्रित हुनुहोस् - बहु उद्देश्यहरू केन्द्रित गर्नुको सट्टा, एकल लक्ष्यमा लाग्ने प्रयास गर्नुहोस्। यदि तपाइँको विज्ञापन मा धेरै बेच्ने बिन्दु समावेश छ, यो एक पिच जस्तै देखिन्छ र प्रयोगकर्ताहरू केवल तपाइँको विज्ञापन विगत स्क्रोल हुनेछ।
जैविक मिश्रण गर्नुहोस् - तपाईका सिर्जना गरिएका विज्ञापनहरू बढि प्रमोशनल हुँदैनन् र ईन्स्टाग्राम फिडहरूमा जैविक रूपमा एकीकृत हुनुपर्दछ। दिमागमा राख्नुहोस्, तपाईंको लक्ष्य तपाईंको श्रोताको ध्यान खिच्न र उनीहरूको समस्याहरूको लागि उत्तम सम्भव समाधान प्रदान गर्नु हो।
परीक्षण - आदर्श रूपमा तपाईले आफ्नो भिडियो विज्ञापनको बहु संस्करणहरू सिर्जना गर्नुपर्नेछ कि कसले तपाईंको लक्षित श्रोतासँग राम्रोसँग काम गर्दछ। निश्चित गर्नुहोस् कि तपाईंको इन्स्टाग्राम विज्ञापनले एक उत्तम अनुभव प्रदान गर्दैछ र प्रयोगकर्ताहरू रूपान्तरणतिर लागेका छन्।
इन्स्टाग्राम एक उत्कृष्ट मार्केटिंग प्लेटफर्म हुन सक्छ, जसले तपाईंलाई ब्राण्ड जागरूकता सिर्जना गर्न र भिडियो र अन्तर्क्रियात्मक दृश्य सामग्री मार्फत तपाईंको ब्रान्ड विस्तार गर्न सक्षम पार्दछ, तर तपाईंको वेबसाईटमा जैविक ट्राफिक पनि ड्राइभ गर्छ र रूपान्तरणको प्रचार गर्दछ।
यस सूचीमा तपाईं अरू के सुझावहरू थप्नुहुन्छ? तपाईं पहिलोमा कुन योजना बनाउँदै हुनुहुन्छ? मलाई तल टिप्पणी अनुभागमा जानकारी दिनुहोस् र म कुराकानीमा सहभागी हुन पाउँदा खुसी हुनेछु।
टैग: कसरी इन्स्टग्राम भिडियो विज्ञापनइन्स्टाग्राम विज्ञापनइन्स्टग्राम क्यारोजेल विज्ञापनहरूइन्स्टग्राम भिडियो विज्ञापनइन्स्टग्राम भिडियो विज्ञापन आकारइंस्टाग्राम भिडियो विज्ञापन सुझावहरूइन्स्टाग्राम भिडियो विज्ञापन चरणहरूइन्स्टाग्राम भिडियो क्याप्शनइन्स्टाग्राम भिडियो सम्पादनइन्स्टाग्राम भिडियो पाठइंस्टाग्राम भिडियोहरू
क्रिस्टियान स्टानसियु एक स्वतन्त्र भिडियो सम्पादक हो, मालिक र पोस्ट-प्रोडक्शन कोर्डिनेटर Veedyou मीडिया - एक कम्पनी भिडियो फोटोग्राफरहरू, मार्केटिंग एजेन्सीहरू, भिडियो उत्पादन स्टुडियो वा विश्वभर सबै ब्रान्डहरूमा भिडियो सम्पादन सेवाहरू प्रदान गर्दै।
स्क्वायरस्पेस: म एक दिन मा एक अनलाइन स्टोर र नियुक्ति सेटिंग संग एक स्पा वेबसाइट बनाएँ
अन्डररेटेड लिंक भवन रणनीतिहरू जुन आश्चर्यजनक रूपमा काम गर्दछन्